‘महिलालाई सशक्त र निर्णायक भूमिका दिनुपर्छ’ |
प्रकाशित मिति :2018-02-05 14:40:43
सीता सुन्दास स्याङ्जा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक हुन् । नेकपा एमाले नेतृ सुन्दास भर्खरै मात्र काठमाडौंमा सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षमा समेत चयन भएकी छिन् । एमालेको केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्य एवम् अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य समेत रहेकी सुन्दाससँग महिला खबरले गरेको यो कुराकानी ।
तपाईं राजनीतिमा कसरी आउनुभयो ?
मेरो जन्म सामान्य परिवारमै भएको हो । राजनीतिमा आउन अप्ठ्यारो थियो । भूमिगत कालमा समस्याहरुसँग जुध्दै राजनीतिमा लागियो । बेलुका खाना खाएर सुत्ने समयमा गाउँमा कार्यक्रम कहाँ छ भनेर सम्पर्क हुन्थ्यो । बेलुका आमाहरु सुतिसकेको अवस्थामा हामी सुटुक्क उठेर कार्यक्रममा जान्थ्यौँ ।
राती बैठक बसेर सुटुक्क कसैले थाहा नपाउने गरेर विस्तारमै आएर सुत्थ्यौं । बिहान अभिभावकले हेर्दा ओच्छ्यानमै हुन्थ्यौं । बिहान उठेर घरगोठको धन्दादेखि, घाँस दाउरा त छँदैछ । यसरी राजनीतिमा लागियो ।
राजनीतिमा लाग्नुको कारण नै समाज हो । समाजको परिवेश हो । हाम्रो यस्तो पछौटे समाज छ । दलित भएकै कारण जुन समाजमा मान्छेले मान्छेलाई छुनुहुँदैन् । मान्छे जन्मिएर तोते बोली बोल्दै गर्दा यहाँ जानुहुँदैन्, त्यहाँ छुनुहुदैँन् भनिन्छ । यो अवस्था देख्दा सानैदेखि कसरी चिर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो ।
अर्को महिला र पुरुषबीचको विभेद । महिला र पुरुषकाबीचमा यति ठूलो खाडल छ, जुन खाडल आजसम्म पनि चिर्न सकिएको छैन् । हामी देख्छौं, यही समाज हो जहाँ छोरा जन्मँदा खसी र छोरी जन्मिदा फर्सी काट्ने गरिन्छ । छोराको आशामा दश वटासम्म छोरी जन्मिदा समेत छोरा भएन् भनेर अर्को विवाह गर्ने यहि समाज हो । यस्तो समाजले गर्दा मनमा चिन्ता हुन्थ्यो ।
अर्को जातीय विभेद । हुँदा खाने र हुने खानेबीचको विभेद, महिला र पुरुषबीचमा हुने विभेद । यिनै विभेदले नै मलाई सताइ रहन्थ्यो ।
मान्छे–मान्छेको बीचमा कसरी बाँच्न पाउने, महिला र पुरुषबीचमा कसरी समानता होला, हुँदा खाने र हुने खानेबीचमा कसरी समानता कायम गर्न सकिएला भन्ने लाग्थ्यो । नहुनेलाई भरे के खाने, हुनेलाई एसआराम गर्ने खालको अवस्था । यसबाट कसरी छुट्कारा पाउन सकिन्छ भन्ने त्यतिबेलादेखि चिन्ता हुन्थ्यो । यहि विभेदको खाडल चिर्न २०३८-३९ सालदेखि राजनीतिमा लागे ।
सुरुमा अनेरास्ववियुमा आवद्ध भएँ । अनेम संघमा लागे । २०४७ मा संगठित पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे । विस्तारै तत्कालिन पूर्व मालेमा समाहित भए । त्यहाँ गइसकेपछि कार्यक्रममा फलामे अनुशासन हुन्थ्यो । हाम्रो समाजमा हामी एक्लै बसेर खान्थ्यौ तर त्यहाँ गइसकेपछि सबैसँगै बसेर चिया, पानी, खाजा खाने गथ्यौं । त्यसले मलाई साह्रै छोयो । त्यहाँ जाँदा मुक्ति हुन्छ भन्ने मैले बुझे त्यसपछि राजनीतिमा लागे ।
पार्टीमा लाग्दा कुन–कुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ?
गाउँ कार्यसमितिको सक्रिय सदस्य थिए । त्यसपछि नगर कमिटीमा भए । पार्टीको क्षेत्रीय कमिटीमा गएँ । जिल्ला कमिटीको सदस्य भएँ । अनि अञ्चल कमिटीमा । त्यसपछि राष्ट्रिय प्रतिनिधी परिषद् सदस्य र अहिले केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्यमा छु ।
अर्को म अनेमसंघमा पनि गाउँ तयारी सदस्य, इलाका, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, अञ्चल समिति र अहिले केन्द्रीय सदस्यमा छु । मुक्ति समाजको जिल्ला समिति सदस्यबाटै केन्द्रीय सदस्य र अहिले सल्लाहाकार सदस्यमा छु ।
जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक भएर काम गर्न कतिको सहज छ ?
कुनै पनि काम सहज हुँदैन । जहाँपनि चुनौति हुन्छन् । अप्ठ्यारा हुन्छन् । त्यसलाई चिर्दैअघि बढ्ने हो । त्यसकारण असहज केलाई भन्ने ? काम गर्ने कुरालाई सहज बनाउँदै लैजाने कुरा हो ।
पार्टीले मुल्याङ्कन ग¥यो र समन्वय समितिको प्रमुखमा पठायो । हिजो पार्टीको एउटा सिंगो कमिटी संचालन गर्ने, कार्यक्रम गर्ने, महिला सशक्तिकरण गर्ने, महिलालाई अनेम संघमा आवद्ध गर्ने कामहरुमा व्यस्त भइन्थ्यो । तर अहिले जुन भूमिका पार्टीले मलाई पठाएको छ । यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि धेरै चुनौतीहरु छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति हिजोको जिल्ला विकास समिति जस्तो छैन् । हिजोको जिल्ला विकास समितिमा धेरै कामहरु निश्चित थियो । समितिले यो कामहरु गर्नु भनेर राखेको थियो । बजेट, विकास निर्माणका काम जिल्ला विकास समितिले गथ्र्यो । हिजो जिल्ला सभापति, एलडिओले गर्नुहुन्थ्यो । तर अहिले बदलिदो परिवेशमा हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारीसगैँ हाम्रो भूमिकालाई समन्वयकारी भूमिका मात्रै भनेको छ ।
स्याङ्जा महिला मैत्री जिल्लाको रुपमा परिचित भएको छ । त्यहाँको महिलाको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय महिलाहरु सशक्त हुनुभएको छ । हाम्रै पार्टीमा हेर्दापनि ८ ठाउँमा महिलाले उपप्रमुख जितेका छौँ । स्याङ्जामा एक ठाउँमा प्रमुख जितेका छौँ । अहिले प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा पद्मा अर्याल हुनुहुन्छ । मेयरमा पुतली बजारको मेयरमा सीमा क्षेत्री हुनुहन्छ । म जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको हैसियतमा छु । समग्रमा हेर्दा महिलाहरुको राजनीतिक रुपबाट सशक्त भएको जिल्ला हो स्याङ्जा । सामाजिक रुपबाट हेर्दा अहिले पनि गाउँ तहमा पछौटेपन त छ नै । मेरै उमेरका महिलाहरु पनि ल्याप्चे लगाउने अवस्था छ । तर समग्रमा हेर्दा महिला अगाडि आएका छन् ।
महिलालाई सशक्त बनाउन राजनीतिक दलले कस्तो भूमिका दिनुपर्छ ?
महिला राजनीतिक रुपबाट नीति, निर्माण गर्ने ठाउँहरुमा जनसंख्याकै अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो । राज्यका सबै तहमा ५१ प्रतिशत गाउँ तहदेखि केन्द्रसम्म हुनुपर्छ भन्ने हो । तर संविधानमा के भयो भने केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत भनेको छ ।
राजनीति दलले महिलाहरुलाई भूमिका दिन्छन् भन्ने देखिएन् । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा दुई जिल्लामै मात्रै महिला प्रमुख हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि प्रदेश नं ४ को स्याङ्जामा म भए । मुस्ताङमा छिरिङ लामा गुरुङ हुनुहुन्छ ।
यत्रो ७७ जिल्लामा २ वटा जिल्लाले मात्रै महिला प्रमुख पायो । अरु जिल्लामा पाएन् । कानून तथा नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि महिलाहरु नभएपछि त्यो हुन सकेको छैन् । अहिले उदाहरणको रुपमा हेर्दा पनि ४० प्रतिशतमा ३३ प्रतिशत भनेको १२-१४ जना महिला प्रमुख हुनुपथ्र्याे तर एमालेमा पनि त्यो हुन सकेन् । त्यसैले महिलालाई सशक्त बनाउन राजनीतिक दलले सशक्त भूमिका, निर्णायक भूमिका महिलालाई दिनुपर्छ । सबै निकायमा हुनुपर्छ, सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । संस्थामा, पार्टीका कमिटीहरुमा हुनुपर्छ । जहाँ महिलालाई जिम्मेवारी दियो त्यसले उनीहरुलाई जिम्मवार बनाउँछ ।
तपाई दलितहरुको पनि प्रतिनिधि हुनुहन्छ, दलितहरुको उत्थानको लागि नीतिगत आवश्यकता के हो ?
नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबै दलित र गैरदलितबीच सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्छ । अर्को दलितहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुको लागी योग्यता, क्षमताका आधारमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । अझैपनि दलित समुदायका महिलाको अवस्था दयनीय छ । उनीहरुलाई शसक्त बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकारलाई व्यवहारमा देखिनेगरि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
प्रस्तुती – सन्दिप विक